आठ जना प्रहरीको ह’त्या गरेर फरार रहेका विकास दुबे पक्राउ परे – Sandesh Munch
आठ जना प्रहरीको ह’त्या गरेर फरार रहेका विकास दुबे पक्राउ परे
July 9, 2020 207
नयाँदिल्ली, २५ असार । भारतको कानपुरमा आठ जना प्रहरीको ह’त्या गरेर फरार रहेका विकास दुबे पक्राउ परेका छन् । भारतको उज्जैनबाट उत्तर प्रदेशका कुख्यात गुण्डानाइके विकास दुबे पक्राउ परेका हुन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनी महाकालको दर्शनका लागि उज्जैन गएका थिए । त्यहाँको सुरक्षा गार्डले उनलाई चिनेका थिए । त्यसपछि तत्काल प्रहरी एक्सनमा आएर उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।
दुबेको गिरफ्तारीको विषयमा विस्तृत जानकारी नदिइएको भए पनि मध्य प्रदेशको प्रहरीले उनको पक्राउको पुष्टि गरेको छ । भारतीय प्रहरीले दुबेबारे सूचना दिनेलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ भारू पुरस्कार दिने घोषणासमेत गरेको थियो ।
गत मंगलबार दुबे हरियाणाको फरिदाबादको एक होटलमा देखिएका थिए । त्यहाँबाट भागेर उनी मध्यप्रदेश पुगेका हुन् । यसैबीच बिहीबार नै कानपुर र इटावामा गरी दुई इन्का’उन्टर भएको छ । प्रहरीसँगका यी दुई इन्का’उन्टरमा दुबेका दुई सहयोगी पनि मा’रिएका छन् ।
Prevनवनियुक्त आइजिपी शैलेश थापालाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
Nextगाडीका पार्टपूर्जामा खिया लाग्याे, यातायातकर्मीको अवस्था नाजुक बन्दै
जिल्ला अस्पताल रामेछापबाट एकै पटक १३ जनाले जिते कोरोना
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति सबै भन्दा भाग्यमानी हुन्छन
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (84124)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27670)